संक्रमणबीच कसरी मनाउने तिहार ? « Naya Page
संक्रमणबीच कसरी मनाउने तिहार ?
काठमाडौं, ३० कार्तिक । कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहेकाले सजगतासाथ तिहार मनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
चाडपर्वको समयमा एकै ठाउँमा धेरै जना जमघट गर्दा संक्रमण थप फैलिने भएकाले सावधानी अपनाउन उनीहरूले सुझाएका हुन् । सरुवा रोग विशेषज्ञ डा.अनुप बाँस्तोलाका अनुसार पर्वको समयमा विशेष गरी बालबालिका र वृद्धवृद्धाले बढी सावधानी अपनाउन आवश्यक छ ।
सरकारले लक्षण भएका कोरोना संक्रमितको मात्रै निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने भएको छ । निःशुल्क सेवा सरकारी अस्पताल र प्रयोगशालामा मात्रै उपलब्ध हुनेछ । आइसोलेसन सेन्टरमा बस्नेले शुल्क तिर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट